သတင်းမီဒီယာများတွင် | မြျှောလငျ့ခ Medical Center မှ
Sangju ကြက်ခြေနီဆေးရုံ, Hope Medical Center သည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်လွယ်သူများအတွက် ကောင်းမွန်သောအကူအညီတစ်ခုဖြစ်သည်။
【Sangju】 Sangju ကြက်ခြေနီဆေးရုံ(ဒါရိုက်တာ Lee Sang-soo) 'Hope Medical Center' သည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်လွယ်သူများအတွက် ကြီးမားသောအကူအညီကို ပေးသည့်အတွက် နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသော ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများကို ရရှိနေပါသည်။. 'Hope Medical Center' သည် Sangju ကြက်ခြေနီဆေးရုံ၏ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပရောဂျက်ဖြစ်သည်။ ...
အင်ချွန်းကြက်ခြေနီဆေးရုံ Hope Medical Center, အင်ချွန်းရှိ မသန်စွမ်းသူများနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ချို့တဲ့သူများအတွက် မျှော်လင့်ချက် မီးရှူးတန်ဆောင်
Yeongju ကြက်ခြေနီဆေးရုံ Hope Medical Center, ဒေသတွင်း ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ချို့တဲ့သူများအတွက် မျှော်လင့်ချက်
(Yeongju = နိုင်ငံတကာသတင်း) သတင်းထောက် Baek Baek = Yeongju ကြက်ခြေနီဆေးရုံ(ဆေးရုံဒါရိုက်တာ Yeoseung Yoon) Hope Medical Center သည် ဒေသတွင်းရှိ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ချို့တဲ့သူများအတွက် မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်လာသည်။. Yeongju ကြက်ခြေနီဆေးရုံ Hope Medical Center ...
Namsang-myeon၊ Geochang-gun ရှိ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်လွယ်သူများအတွက် 'Red Cross Hospital Hope Treatment Center' နှင့် ဆက်စပ်၍ ပံ့ပိုးကူညီခြင်း၊
ဆောင်းရာသီ အအေးလှိုင်းတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး လူမှုဖူလုံရေးတွင် မျက်မမြင်အစက်အပြောက်များကို ဖြေရှင်းရန် အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ Namsang-myeon၊ Geochang-gun(အကြီးအကဲ Myeon Kim Jin-tae)20 ရက်နေ့တွင် အအေးလှိုင်းကြားတွင် ပြင်းထန်စွာ ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု မရသော မသန်စွမ်းသူများ၊ ...
Tongyeong ကြက်ခြေနီဆေးရုံ Hope Medical Center, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်လွယ်သူများအတွက် ပံ့ပိုးပေးခြင်း
Samsung Group Social Welfare Community Chest မှတဆင့် ဝမ်သန်း 170 ကို သတ်မှတ်ကာ လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ▲ Tongyeong ကြက်ခြေနီဆေးရုံ၏ မြင်ကွင်းကျယ်မြင်ကွင်း Tongyeong ကြက်ခြေနီဆေးရုံသည် 2021 ခုနှစ်တွင် ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်သည်။ ...
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်လွယ်သူများကို ကုသပေးသော Yeongju ကြက်ခြေနီဆေးရုံ
အခမဲ့ dementia စစ်ဆေးခြင်း။·သွေးတွင်းသကြားဓာတ်စစ်ဆေးခြင်းကဲ့သို့သော ဒေသဆိုင်ရာ ပြည်သူ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပရောဂျက်များကို တက်ကြွစွာမြှင့်တင်ခြင်း။ ▲ Yeongju ကြက်ခြေနီဆေးရုံ ...
20Korea-U.S. Cham Medical Personnel Award မှ ဒါရိုက်တာ Jang Cheol-ho·ဆိုးလ်ကြက်ခြေနီဆေးရုံ
2002Hanmi Pharm·ဆိုးလ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသင်းမှ ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းသည်။···ကမ္ပည်းပြားနှင့် ငွေသားဆုငွေ ရူပီး၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ Bethesda ဆေးရုံ၏ ဒါရိုက်တာ Cheol-ho Jang သည် အကြိမ် 20th Korea-US Cham Medical Personnel Award ကို လက်ခံရရှိသူအဖြစ် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။(ဝဲ)အတန်း ...
စင်တာတွင် ၎င်း၏ အသက်တာအချင်းဝက်ရှိသည်။
ရက်ရောသော လူနေမှုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုမဟုတ်သော်လည်း အများသူငှာ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပရောဂျက်များကို ကူညီရန် လှူဒါန်းပါသည်။ ▲ ၉ ရက်မြောက်နေ့တွင်၊ Tongyeong၊ Docheon-dong တွင်နေထိုင်သော Son Doo-ri သည် ပြည်သူ့ဆေးကုသရေးစီမံကိန်းအတွက် Tongyeong ကြက်ခြေနီဆေးရုံသို့ ဝမ် ၁ သန်း လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ...
Tongyeong ကြက်ခြေနီဆေးရုံ, Samsung Group သည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်လွယ်သူများအတွက် 'Medical Expense Support Project' ကို ပံ့ပိုးကူညီခဲ့သည်။
14ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Tongyeong ကြက်ခြေနီဆေးရုံသည် Samsung Group ၏ လူမှုဝန်ထမ်းအသိုင်းအဝိုင်းရင်ဘတ်မှတစ်ဆင့် ယခုနှစ်အတွင်း ဝမ်သန်း 170 ဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော ဝမ်သန်း 170 ဖြင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်ထောက်ပံ့ရေးပရောဂျက်ကို စတင်ခဲ့သည်။ ...
Sangju ကြက်ခြေနီဆေးရုံ, ခွဲစိတ်ကုသစရိတ်နှင့် လိုချင်သော ဆေးကုသမှုစရိတ်များ ထောက်ပံ့ကူညီရေး ပရောဂျက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း။
နှစ်ကုန်တွင် ချို့တဲ့သူများကို ခွဲစိတ်မှု ၄၀ ပေးခဲ့သည်။, ဆေးဖိုးဝါးခအတွက် လူပေါင်း 8300 ကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။